IsiXhosa: Izakhi nemigaqo yokusetyenziswa kolwimi. Ibanga 8 | Create WebQuest
IsiXhosa: Izakhi nemigaqo yokusetyenziswa kolwimi. Ibanga 8
Molweni bafundi bolwimi lwesiXhosa bebanga lesi 8, namhlanje sizakufunda ngezakhi nemigaqo yokusetyenziswa kolwimi. Sizakugxila kwizivumelanisi, abanye bayayazi yintoni izivumelanisi nangona abanye bezibuza ukuba ingaba yintoni izivumelanisi, khululekani ke bafundi sizakufumana ulwazi oluphangaleleyo kwisifundo sanamhlanje. Abafundi bazakufumana ithuba lokuvavanywa ukuqonda ngesifundo sanamhlanje emva kokuba sigqibile ukunika inkcazelo nemizekelo ngokuthi benze umsebenzi ozakuhlolwa.
IZIVUMELANISI: Isivumelanisi ligama elenza ukuba kubekho ukuvumelana phakathi kwezigaba zentetho njengoko zisetyenziswa kwizivakalisi.
Apha kwizivumelanisi ke bafundi siye sifumane iindidi okanye iintlobo ezimbini ezaziwa ngokuba sisivumelanisi sentloko kunye nesivumelanisi senjongosenzi. Zombini ezi ndidi zifumaneka kwizivakalisi.
Jongisisa ezi zivakalisi:
1. Iintatheli zenza udliwanondlebe nomphathiswa wezezimali. (u-z ka zenza sisivumelanisi sentloko engu-iintatheli)
2. Abafundi bawafihla ezipokothweni amaphepha. (u-wa sisivumelanisi senjongosenzi esingu-amaphepha)
Umsebenzi 1: Chonga izivumelanisi.
Chonga izivumelanisi zentloko nezenjongosenzi kwezi zivakalisi
1. Abafazi banxiba izikhaka ngezisusa ezikhulu kwaXhosa
2. UNandi uyazimisela emsebenzini wakhe.
3. Abfazi babuhluze ngokwabo utywala bomgidi.
4. Izifo neentsholongwane ziyathinteleka ngale ndlela.
5. UMiya wawulwela wabomvu umzi wakhe.
Umsebenzi 2: Yila izivakalisi
Yila izivakalisi zibentlanu uchonge izivumelanisi kwaye uchaze ukuba ziloluphi udidi.
Nanjengoko ke bafundi sifundile ngezivumelanisi, umsebenzi luvavanyo lokuqonda oko nikufundisiweyo ukuba niyakuqonda na. Lo msebenzi uphuhlisa isakhono sokubhala nokunikezela ukuze kuhlolwe ukuqonda kwaba fundi kulungiswe neempazamo okanye iziphene kuphinde kucaciselwe abo basilelayo.
> Sebenzani ngababini ukwenza lo msebenzi.
> ukuphuhlisa ukuqonda kwenu sebenzisani incwadi yomfundi ethi KwaXhosa zibenza zibutya Ibanga 8
> Ukhanyo yebanga 8
> Masilole isiXhosa Ibanga 8
INDLELA YOKUHLOLA UMSEBENZI
Uyilo lwezivakalisi (5)
Iindidi zezivumelanisi (5)
Amanqaku ewonke (20)
Izivumelanisi ziphantsi kwemigaqo yokusetynziswa kolwimi, ulwimi abanye bayalithetha nje kodwa ke lune ndlela elwakhiwe ngayo efundiswa ezikolweni. Namhlanje sibonise iindidi zezivumelanisi nomsebenzi wazo kwizivakalisi nakwizigaba zentetho.
Oxford, Ukhanyo INcwadi yoMfundi Ibanga 8
CAPS, KwaXhosa zibenza zibutya Ibanga 8
Name & Surname: Sikhonathi Barnes
Student Number: 216151147